Asọmpi Wiki nke Nde Nde na John Chow dot Com | Martech Zone
John Chow ntụpọ Com na-ejide ihe ọjọọ ọzọ blog zoo. Ọ na-enye ihe ngosi 24 ″ obosara LCD nyochaa na akwụkwọ ntinye aka nke akwụkwọ ahịa kachasị mma, Ọrụ 4-Hour Workweek! Chọpụta otu esi abanye Ebe a. Asọmpi a na-akwado ya Wiki Wiki nke Nde Dollar. Jiri koodu coupon JohnChow iji chekwaa $ 10 na ibe.
Tonight m zụrụ na peeji nke “Email”… O juru m anya na ọ bụ na-emeghe! Emerụrụ m ụgwọ $ 100 maka ibe ahụ n'ihi na echefuru m itinye koodu coupon. M dere ndị na-ere wee gwa ha achọghị m $ 10, mana achọrọ m ntinye ndị ọzọ na asọmpi John !!!
Ihe karịrị $ 9,000 na July!
Rịba ama John Chow: N'ọnwa gara aga ka m mere $ 3,300 na blog a n'ihi ndụmọdụ gị ma gbakwunye ọzọ $ 6,000 na nkwekọrịta mmepe nke m nwere ike ikwu na blọọgụ m. $ 2,700 nke $ 3,300 bụ 'ihe ọjọọ' mana ọ nyeere aka kwụọ ụgwọ nrụzi ụgbọ ala nwa m nwoke na kọmpụta ka ọ na-aga kọleji. Daalụ, John!
Aug 13, 2007 na 10:52 PM
Amaara m na ọ bụrụ na m kpoo ihe ọkụ mmụọ m na-eme na-ezighi ezi mgbe ọ bịara na AdSense ehi a .. Enwere m obi ụtọ ma ọ bụrụ na m na-eme ọbụna 50cents kwa ụbọchị .. na-abụkarị zilch
Aug 14, 2007 na 7: 34 AM
Google emeghi nke oma na saiti m. Inwere ike gbalịa ịkpụzi mgbasa ozi ka ị na - ejikọ ọdịnaya gị karịa ịnwe agba dị iche iche na ala.
Enweghị m ike icheta ebe m gụrụ ya mana ndị mmadụ nwere ike ịpị ma ọ bụrụ na ha echeghị ma ọ bụrụ na ọ bụ mgbasa ozi doro anya. Ọ bụ ya mere ederede ederede na-enwekarị clicks karịa mgbasa ozi ihe oyiyi.
Ọzọkwa - nke a bụ BIG, nke nkịtị, ọnwa. Ọ ga-amasị m ka ọ bụrụ ihe nkịtị!
Ndepụta nde dollar
Aug 16, 2007 na 10: 29 AM
Achọtara m peeji gị ebe ị na-eme nyocha banyere Wiki Dollar. Ekemendela m denye aha na ndepụta gị;)
MDW bụ nkwalite site na MDHP n'ihe banyere inye ezigbo onyinye yana kwa uru. Echere m na mkpọtụ mbụ na ụda na-adịbeghị anya sitere na John Chow ga-eme ka saịtị a dị elu iji mee ka ọ too n'okpuru oge nke ya.
Aug 16, 2007 na 11: 41 AM
Obi dị m ụtọ inwe ebe a! Ekwenyere m gị na obi gị dum n'echiche ahụ na ogbugbu ya!
Daalụ maka ịza ajụjụ na enwere m obi ụtọ na ị debanyere aha!